Ranon-tsambo Bang Pae Phuket ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Ranon-tsambo Bang Pae
Ranon-tsambo Bang Pae Phuket
Fijery momba ny riandrano Bang Pae ao Phuket. Vidin-javatra.
Bang Pae Waterfall ao amin'ny sari-tany. Ahoana no hahatongavana any.
Sarin-tsary sy horonan-tsary an'ny Rano Bang Pae
Hevitra ho an'ny Waterfall Bang Pae (valin'ny Google)
Bang Bae Waterfall Review (Tripadvisor.ru)
Ranon-tsambo Bang Pae Overview
Ny riandrano lehibe indrindra sy tsara tarehy indrindra ao Phuket. Tsy andian-drano tokana akory izany. Voalohany dia tonga any amin'ny lehibe indrindra ianao, fa hatrany amin'ny ony, andian-drano kely kely nefa tena mahafinaritra
Amin'ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia latsaka ny 15 m eo akaikin'ny tongotra dia misy farihy kely izay ahafahanao milomano.
Ao amin'ny faritry ny zaridainam-panjakana dia misy foibe fanarenana ho an'ireo gibbons tratry ny poachers. Ny fidirana amin'ity akany ity dia mihidy amin'ny olon-tsy fantatra. Saingy lavitra lavitra dia afaka mahita azy ireo ianao ary mihaino azy ireo.
Ny vidin'ny fitsidihan'ny riandrano Bang Pae
Ny renirano Bang Bae dia hita ao amin'ny faritry ny faritany mahafinaritra Khao Phra Thong National Park. Vita ny fidirana amin'ny faritany - 200 baht.
Manomboka amin'ity riandrano ity ianao dia afaka manao diabe mahafinaritra mankany amin'ny riandrano hafa izay eo amin'ny ilan'ny zaridainam-panjakana - Randranon'i Ton Sai. Ary io fanenjehana io dia handalo ny ala. Azonao atao ny misintona ny iray amin'ireo mponina eo an-fefy, na ahafahanao mandehandeha an-jaza kely fotsiny. Misimisy kokoa momba io fanaraha-maso io ny voasoratra. eto.
Manodidina ny 1 km miala ny fidirana mankany amin'ny zaridainam-pirenena mankany amin'ny riandrano. Eo amin'ny fidirana dia misy fivarotana vitsivitsy misy sakafo maivana, kafe, trano fisakafoanana, ary trano fidiovana aza. Misy toerana tsara fiantsenana lehibe ho an'ny karazana fiara fitaterana rehetra.
Amin'ny lafiny iray amin'ny zaridaina akaikin'i Ton Sai Falls dia misy toe-javatra mitovy amin'izany. Fa bebe kokoa momba izany amin'ny famerenany ny riandrano io.
Mandro anaty riandrano 🙂
Afaka milomano ao amin'ny lovia Bang Bae Falls ianao, araka ny ho hita eo amin'ny sary. Manoro hevitra anefa isika hitandrina, satria ny biby dia ny bibilava sy ny bibilava no hita ao .. na any anaty rano na any an-tanety. Ny firaisankina nefa dia mitranga izany. Aza hadino ihany koa fa ny ambany ery vatolampy ary tsy mihetsika. Misy vato maranitra koa.
Malaza ihany koa ity riandrano ity amin'ny tanora ao an-toerana. Mandro midina kely izy ireo, izay tsy misy mpizahatany.
Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia manaiky fa tsy ratsy ny riandrano, fa ny làlana mankany dia tsara tarehy, ary tokoa tokoa ny valan-javaboary iray manontolo, izay misy an'io toerana rehetra io.
Ahoana no hahatongavana any. Tondro ho an'ny fanamoriana. Ny adiresy
Address. Tsy fantatra anarana Rd, Pa Klok, Distrikan Thalang, Phuket 83110, Thailandy
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/jGsSZCJ22mfmWn8eA
Bang Pae Waterfall ao amin'ny sari-tany
Ranon-tsambo Bang Pae Sary sy horonan-tsary
Hevitra ho an'ny Waterfall Bang Pae (famerenana Google)